Natraygroup | “Casabella 22nd Anniversary Sale”
“Casabella 22nd Anniversary Sale”
Posted by natray natray | July 13, 2016	| PROMOTION |
ချစ်ခင် တန်ဖိုးထား လေးစားရပါသော Customer များနဲ့ မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ……..Casabella Home Furnishing Center အနေဖြင့် Customer များနဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု၊ ယုံကြည်မှုတို့ကို
တလေးတစား သယ်ဆောင်ရင်း ဇူလိုင်မိုးစက်တို့နဲ့ အတူ ၂၂ နှစ် မြောက်ကာလ ခရီးကို တိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Life Style ပစ္စည်းများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးချင်တဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့အတူ မွေးဖွားလာတဲ့ Casabella Home Furnishing Center ဟာ မေတ္တာမှန်လို့ ယောင်ပြန်ဟပ် ကြတဲ့ Customer များနဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့ ကျေးဇူးတရားကြောင့် ဤခရီးကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အတောက်ပဆုံး ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ကျေးဇူးတရားကို အသိအမှတ်ပြု တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အထူး ဈေးသက်သာခွင့် ရမယ့် “Casabella 22nd Anniversary Sale” ကို July လ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၉ ရက် (အာဇာနည်နေ့) အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Casabella ရဲ့ ၂၂ နှစ် ပြည့်မြောက်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Showroom ရှိ Item များ အားလုံးကို ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း ဈေးလျှော့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူတဲ့ ငွေပမာဏများလာတာနဲ့ အမျှ ထပ်မံဈေးလျှော့ပေးမယ့် Additional Discount ကိုပါ ရရှိအုံးမှာပါ။ သို့ပေမယ့် Limited stock ဖြစ်တာမို့ အမြန်ဆုံး လာရောက်ဝယ်ယူမယ်ဆို ပိုစိတ်ချရမယ် ဖြစ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဗလာမပါ Lucky Draw အစီအစဉ်မှာလဲ ဆုကြီးတွေ ကံထူးဖို့ အခွင့်အရေးပိုများ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Lucky Draw အစီအစဉ်ကို ငွေကျပ် ၅ သိန်းဖိုးနဲ့ အထက် ဝယ်ယူအားပေးမယ့် Customer များအားလုံး ပါဝင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးဆု Dunlopillo (King Size) မွေ့ယာ နဲ့ အတူ အခြား ဆုမဲပေါင်း များစွာကို ကံထူးဆွတ်ခူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ …..
Casabella Home Furnishing Center :
အမှတ် ၂၂၊ ပြည်လမ်း၊ (၉) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်။
The Journey of Casabella Home Furnishing Center has been reached successfully to 22nd Anniversary in 2016, carrying customers’ love and trust. This success is because of faithful support of you who understands that Casabella is keen to bring the best life style products into your luxury life.
To refresh all your gratitude, we are going to celebrate “Casabella 22nd Anniversary Sale” for you, starting from 15th July to 19th July 2016.
It is an honor to be given the privilege to invite you to celebrate together and enjoy High Tea with us. As celebration of 22nd Anniversary, we are giving 22% off for all items but on limited stock.
For more satisfaction, additional discount based on how much you purchase and lucky draw program will be entitled. So don’t miss it.
Casabella Home Furnishing Center:
No.22, Pyay Road ,9Mile, Yangon.
(Tel : 01- 664363, 660769)